China gam akporo - Androidsis | Gam akporo (Peeji nke 2)
Cubot P40 bụ ekwentị na-esote site n'aka ndị na-emepụta Eshia iji tinye igwefoto quad nke Budget King. Ọ ga-abata naanị n’ime abalị iri.
Cubot enyela nkọwa mbu nke ekwentị ọzọ: Cubot 20. Ngwaọrụ 4G nke ga-adị na June 1.
Tecno Mobile ekwuputala ngwaọrụ ọhụrụ na ọkụ Spark: Tecno Spark 5. Ngwaọrụ dị ala na ihe nwere ihe ntanetị anọ.
Oppo A92 bụ ekwentị ọhụrụ dị n'etiti na Snapdragon 665 na ColorOS 7.1
A na-enye Oppo A92 ọhụrụ ọhụụ ma ọ bụ Oppo A72 a ma ama nke a ga-ebupute n'oge na-adịghị anya na Malaysia.
Realme ekwupụtala ngwa ọrụ ọhụụ 5G nke ọ kwere nkwa ịmalite n'izu a. Nke a bụ Realme X50m, ngwaọrụ dị n'etiti iji tụlee.
Oppo A72: Ngwaọrụ ọhụrụ nwere ogwe 6,5,, Snapdragon 665 na ColorOS 7
Oppo A72 bụ ngwaọrụ ntinye ọhụrụ nke ụlọ ọrụ China. Ekwuputala ya na Germany ma aga ewepụta ya na Europe na mbido.
Oppo A52 bụ ukara na Snapdragon 665 na ColorOS 7
Oppo ekwuputala ọkwa A52 ọhụrụ, ngwaọrụ dị n'etiti na-arụ ọrụ nke ọma na nke mbụ.
Oppo Find X2 Neo pụtara na ụlọ ahịa Europe yana 12 GB nke RAM na Snapdragon 765G
Nweta Find X2 ga-agbasa site na mwepụta nke ihe ọhụrụ, chọta Find X2 Neo. Ngwaọrụ pụtara na ụlọ ahịa ndị Europe.
Oppo A92S bụzi gọọmentị mgbe ọtụtụ leaks gasịrị, gụnyere ozi dị na kọlụm ya, agba nke ọ ga-abata na onyonyo nke ngwaọrụ ahụ.
Nubia ga-ekwuputa na March 21 ekwentị ọhụrụ akpọrọ Nubia Play, ngwaọrụ dị n'etiti nwere ikike 5G.
Hisense F50 ga-abụ ekwentị 5G izizi sitere na ụlọ ọrụ ndị China
HiSense ga-eweta ekwentị 5G mbụ ya akpọrọ F50 na Mọnde, ngwaọrụ nke na-ejikọ mgbawa site na onye nrụpụta Unisoc.
Oppo A12 gafere asambodo Bluetooth tupu ekwuputa na ọkwa egosi nkọwa ndị dị mkpa dịka ihuenyo, batrị na ihe ndị ọzọ.
Vivo Y50 kwadoro: Ekwentị panel 6,53 with nwere igwefoto quad
Vivo Cambodia ekwenyela ekwentị ọhụrụ maka ahịa Eshia na mbido, Vivo Y50. Ọ bụ etiti-etiti ya na ezi batrị.
E gosipụtara ihe oyiyi zuru ezu na nkọwapụta nke Oppo Find X2 Lite, onye ọhụụ ọhụrụ nke ezinụlọ Find X2.
Infinix na-ewebata ekwentị ọhụrụ 7 na Note 7 Lite na gam akporo 10
Infinix emeela ụlọ ọrụ Hong Kong ewebatala ekwentị ọhụrụ abụọ, nke eji mara 7 na Note 7 Lite. Ha bụ ndị na etiti ọdụ etiti abụọ ga-abịa n’isi nso.
Ihe 5 iji zụta rugharị Cubot King Kong CS smartphone
Ọ bụrụ na ị na-achọ a jupụtara na nkume smartphone na a ezi uche price, ị kwesịrị ị na-a lee anya na Cubot King Kong CS, a ama na-erughị $ 100.
Vivo S6 5G bụ onye ọrụ: Exynos 980 na 6,44-inch panel
Vivo S6 5G bụ onye ọrụ ugbu a mgbe ọtụtụ ọnụọgụ tupu ya amalite na ahịa Eshia. Mara ihe omuma banyere ekwentị ohuru a.
Oppo Reno Ace 2 na-ekpughe atụmatụ ya niile na TENAA
Oppo Reno Ace 2 bụ ekwentị na - esote site na ụlọ ọrụ a ga - ahapụ ya, mgbe ọ bịarutere ọkọlọtọ abụọ nke Find X2 ya.
Vivo S6 5G gosipụtara atụmatụ ya ma kpughee isi ihe mmetụta 48 MP
Vivo ekpugherela onyonyo mbụ nke S6 5G, ekwentị nwere nnukwu ihe mmetụta ya na nke ga-erute naanị ihe karịrị otu izu.
Vivo S6 ga-abịa na 5G, ekpughere nke izizi
Vivo S6 na 5G ejirila modem 5G dochie ya ma ọ ga-abụ mgbanwe na ọgbọ nke ise, n'etiti ihe ndị ọzọ.
Blackview na-eme emume ncheta afọ 7 ya na onyinye ndị na-adọrọ mmasị
Iji mee ememme ncheta nke afọ asaa nke onye na-eme smartphone dị ka Blackview, ụlọ ọrụ ahụ na-enye ego na-atọ ụtọ na freebies
Infinix S5 Pro bụ onye ọrụ gọọmentị na igwefoto selfie na XOS 6.0
Ihe ọhụrụ Infinix S5 Pro bụzi onye ọrụ gọọmentị na igwefoto onwe ya na-egosipụta onwe ya yana ụfọdụ njirimara dị mkpa n'agbanyeghị ọnụ ala ya.
Vivo NEX 3s 5G ga-abịa na Snapdragon 865 na okpukpu atọ n'azụ
Vivo egosiputa vidio vidio na ihe oyiyi abụọ nke ekwentị ya na-esote nke a maara dị ka NEX 3s 5G. A ga-ewebata ya n’abalị iri nke ọnwa a.
TCL na-ekwupụta echiche ekwentị abụọ na-agbanwe agbanwe ma na-agbanwe agbanwe
TCL ekwuputala echiche ekwentị ọhụrụ abụọ, mgbanwe na foldable. Ha abụọ nọ na-eto eto tupu ịmalite ọrụ ha.
Oppo Chọta X2 Pro nkọwa zuru ezu kpughere
Emegheela nkọwapụta zuru oke nke ọkọlọtọ ohuru nke Oppo, Find X2 Pro, Ekwentị a ga-ekwuwapụta na Machị 6.
Oppo Find X2 Pro na-ekpughe igwefoto periscope na foto nkwado
Foto nkwado na-egosi Oppo's Find X2 Pro periscope camera, ekwentị nke ga-ezukọta yana Oppo Find X2.
A ga-egosipụta Oppo Find X2 na March 6
A na-agba akwụkwọ maka ihe omume nke Oppo na-eme atụmatụ ịme, nke ga-eweta Find X2 na Machị 6. Ọ ga - eme ya na ngwaahịa ndị ọzọ.
iQOO ekpughere 3 5G ọhụrụ, ekwentị na-abịa site na Qualcomm dị ike processor na atọ dị iche iche.
Meizu 17 ga-abata na Eprel na ihuenyo 90 Hz
Meizu 17 ga-abata site na Eprel ma mara ọhụụ ọhụụ tupu ebupụta ya na ahịa Eshia dị ka nhọrọ dị mkpa.
Infinix S5 Pro leaks na-egosi mmapụta selfie igwefoto
Infinix S5 Pro agbaala agbapụ, ọ na - egosiputa igwefoto selfie na - azụ ya na - egosikwa ihe mmetụta atọ.
Oppo na-ekwuputa agba agba agba nke iOS 7
Agba OS 7 ga-abata na ọnwa ndị na-abịanụ, n'ụzọ dị nkenke na ụfọdụ ekwentị na March 10 na Machị 20 ọ ga-eme ya na ọdụ atọ dịka ọ dị.
iQOO 3 5G na - enweta akara kachasi na AnTuTu
Ihe ọhụrụ iQOO 3 5G bụ otu n’ime ekwentị ndị kachasị n’ahịa n’enweghị mgbagha ọ bụla n’ihi nhazi ya, RAM na nchekwa UFS 3.1.
Oppo A31 bụ ukara: 6,5 ″ ihuenyo na ColorOS 6.1
Mgbe o kwusịrị nkọwa niile, Oppo chọrọ ịkpọsa Oppo A31 ọhụrụ, ekwentị dị ugbu a na Indonesia.
Fọrọ nke nta niile teknuzu nkọwa nke Oppo A31 na-ẹdụk
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkọwa niile nke Oppo A31 na-abịanụ ka ekpughere, ekwentị na-adịbeghị anya site na asambodo Geekbench na Bluetooth.
Oppo na-akwado ozi niile na ihuenyo Find X2
Onye isi oche nke Oppo ekwenyela na panel nke ọhụrụ Find X2 nke a ga-egosi na February 22 na mmemme MWC 2020 na Barcelona.
A ga-ekwuputa Vivo V19 Pro na mbido Machị
Companylọ ọrụ Vivo ga-ekwuputa na mbido Machị nnọchi nke Vivo V17 Pro, nke a maara dị ka V19 Pro. Ọ ga-abịa ịrịgo Qualcomm processor dị ike.
Oppo na-ekwuwapụta Reno 3 Vitality, yana CPU ka mma na obere igwefoto
Oppo amalitela ụdị nke Reno 3 a na-akpọ Reno 3 Vitality, ngwaọrụ mkpanaka nke na-agbakwunye ụfọdụ mmezi nke mbụ.
Vivo Y91C, ụlọ ọrụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ China
Vivo ekwuputala ekwentị Y91C ọhụrụ nke dị ugbu a na Bangladesh wee rute dị ka ụdị nke ụdị Y91i.
A kwadoro Oppo Find X2 na gọọmentị: A ga-eweta ya na February 22
Oppo ekwenyela na ụbọchị na oge nke ngosi nke ọkọlọtọ ya na-esote, Chọta X2. Onye nọchiri ya na Find X abịarute mgbe ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ afọ abụọ.
Ulefone Armor 7, ekwentị nwere nsogbu maka ihe na-erughị euro 500
Ulefone weputara Armor 7 ohuru, ekwentị emere ka ọ gabiga ụdị ule ọ bụla, ihe niile erughị € 500.
Realme C3 na-ekpughe nkọwa ya niile tupu e gosipụta ya
Flipkart's Realme C3 homepage ekpugherela nkọwa niile nke ekwentị ọhụrụ a ga-ahapụ na February 6.
TCL Plex amalite inweta mmelite gam akporo 10
TCL kpebiri imelite Plex ọnụ mgbe ọmalitere na October. Nweta Android 10 na ọtụtụ ndozi.
Nokia na-ekpo ọkụ tupu MWC 2020: nke a ga-abụ usoro ntinye ya ọzọ
Anyị na-ewetara gị nkọwa niile nke Nokia 4.3, ekwentị ntinye na-esote site na ụlọ ọrụ Finnish na nke a ga-eweta na MWC 2020.
Ekwenti ohuru ohuru na enyefe asambodo TENAA
Ekwentị Oppo ọhụrụ gafere na FCC na-egosi ọtụtụ nkọwapụta teknụzụ tupu ngosipụta ya na 2020.
Red Magic 5G ọhụrụ si Nubia ga-abụ otu n'ime smartphones ndị na-esote nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu ihuenyo na ahịa.
Oppo Find X2 ga-enwe ihuenyo 120Hz QHD +
Oppo Find X2 ga-abụ otu n’ime ngwaọrụ ndị na - esote yana ngosipụta 120Hz QHD +. Ọbịbịa ya na-ezo aka na nkeji nke mbụ nke afọ a.
Ekwentị Oppo ọhụrụ gafere asambodo Bluetooth
Onye nrụpụta Oppo ga-ebupụta ekwentị dị ọnụ ala n'oge na-adịghị anya. Ọ agafeela asambodo Bluetooth SIG ma gosipụta nkọwa mbụ.
Doogee S95 Pro bụ ọrụ gọọmentị: Mara atụmatụ ya niile
Doogee chọrọ ịga n'ihu n'ahịa maka ekwentị ndị nwere agba na mwepụta nke S95 Pro ọhụrụ, ihe eji eme ihe.
Gionee Steel 5, akara na-esote etiti ekwentị
Gionee jiri ekwentị ọhụrụ akpọrọ Steel 5 wee laghachi n’ahịa ahụ ma maka ọha mmadụ maka atụmatụ ya dị n’etiti.
Vivo V1950A pụtara na TENAA dị ka ọdịiche nke NEX 3 5G
Vivo na-arụ ọrụ iji wepụta ọtụtụ ekwentị 5G na Vivo V1950A ga-abụ otu n'ime ha mgbe ha jesịrị FCC na teknụzụ a.
Hisense na-egosi ekwentị nwere agba e-ink
Hisense egosiputa ekwentị nwere ihuenyo e-ink agba na CES 2020, mgbe ị gosichara otu na monochrome gara aga.
Realme C2s mara ọkwa maka ahịa Thai
Realme na-ebupụta mmelite C2 naanị na ahịa Thai a na-akpọ Realme C2s. Ekwentị na-abịa na ọnụ ala dị ala.
Oppo patents n'akụkụ igwe ekwentị na-agbanahụ
Oppo ejirila igwefoto nwere mmapụta rụọ ọrụ na ekwentị, ọ pụtara n'otu akụkụ nke ngwaọrụ mkpanaka.
Realme 5i kwadoro mbata ya: Jenụwarị 6
Anyị enwetala ụbọchị mbata nke Realme 5i ọhụrụ ntakịrị karịa ikwenye obodo ọ ga-abata na mbụ. Ọ na-abịa na mbido 2020.
Oppo na-egosi F15 na vidiyo ọhụrụ
Oppo ga-ebupụta ekwentị ọhụụ na India nwere aha F15, ọ ga - abụ Oppo A91 a ma ama malitere ụbọchị ole na ole gara aga na China.
Oppo Reno 3 akara ruru 1,46 nde ndekọ
Ogwe Reno 3 nke Oppo emeela ọtụtụ ndekọ banyere mmasị na China ozugbo ekwuputara ya na Disemba 26.
Vivo S1 Pro rutere India na Jenụwarị 4
India ga-enweta Vivo S1 Pro na mbido Jenụwarị na agba abụọ na o doro anya na ọ bụ otu n'ime smartphones kachasị atụ anya site na ụdị Asia.
You na-achọ ezigbo mobile dị ọnụ ala? Realme 5 Pro dị ọnụ ala karịa na Amazon
Na mbata nke ezumike ekeresimesi, nnukwu ụlọ ọrụ na-ewepụta ohere iji wepụta ego na-adọrọ mmasị na ọtụtụ nke ...
Vivo ga - egosiputa ama ohuru na MWC 2020
Vivo ekwenyela na ọ bịara na Mobile World Congress 2020 na Barcelona. Ọ na-eme ya na ihe ịrịba ama ma gosipụta V na ndabere.
OUKITEL C17 Pro, ihe omuma nke di n'etiti etiti ya na igwefoto ato nke Sony tinyere aka na otutu inye ya maka obere ego
Site na July 22 ruo 29, ị nwere ike iji onyinye a wee nweta Oukitel Y4800 na mbelata dollar 50 na ọnụahịa ikpeazụ ya.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele etu igwefoto Oukitel Y4800 si dị, a na m akpọ gị oku ka ị lelee ya n'onwe gị na vidiyo anyị gosipụtara gị n'isiokwu a.
Ihe nlere ohuru nke Oukitel Y4800, onu ogugu nke gha ada ahia n’etiti ọnwa Julai rue $ 199.
Nke a bụ otu Oukitel si nwalee ogo nke ọdụm ha
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele ogo nke Oukitel K12 ọhụrụ, ụlọ ọrụ ahụ gosiri anyị vidiyo nke anyị na-ahụ ule niile ha na-eme na ya.
OUKITEL K12, batrị mAh 10.000 na ọtụtụ ndị ọzọ
Ihe ọhụrụ OUKITEL K12 na-enye anyị nnukwu batrị 10.000 mAh na ahụ mara mma mechara akpụkpọ anụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ọ bụrụ n’inweghị klaasị ikwu maka Redmi Rịba ama 7 ma ọ bụ Oukitel Y4800, a na m akpọku gị ka ị gaa n’agụ akwụkwọ maka ikpebi otu n’ime mmadụ abụọ ahụ.
Chọpụta ihe niile gbasara Vivo Y15, ekwentị ọhụụ dị n'etiti etiti China ka ewepụtara na India.
Ihe 5 kpatara ịzụta Oukitel K9
Ọ bụrụ na ịmabeghị n'aka na Oukitel bụ ama ị chọrọ, n'isiokwu a anyị nyere gị ihe ise kpatara iji mezigharị onwe gị.
Companylọ ọrụ Asia Realme ka kwupụtara ọkwa na nnweta nke Realme 3 Pro, ama mbụ a ga-ere na Spain
Wepụtara nhazi na njirimara nke OPPO K3, nke ọhụrụ dị n'etiti ndị na-emepụta Asia nke na-apụta maka igwefoto ya nwere ike iwepu ya iji zere ọkwa ahụ.
Themụ okorobịa si Oukitel malitere ngwaọrụ dị iche iche maka mmefu ego niile n'afọ. Agbanyeghị, ọ dị ka ...
Anyị nwere ike idozi Oukitel K9
Ọkọlọtọ nke Oukitel, K9 dị ugbu a maka ire ere yana mbelata ego dị na ọnụahịa ikpeazụ nke $ 249,99.
Firmlọ ọrụ Asia Oukitel ga-ebupụta K12 na June, ọnụ ya na batrị 10.000 mAh anụ ọhịa.
Choputa ihe banyere nkowa nke Vivo S1 Pro, ekwentị ohuru di n'etiti site na ika ndi China nke ebidogoro n'ahịa.
Malite na May 13 ọzọ, ị ga-enwe ike idobe Oukitel K9 wee si otú a chekwaa dollar 50 nke ọnụahịa ikpeazụ ya n'ahịa.
Chọpụta ihe banyere mwepụta nke Vivo Z3X, ekwentị ọhụụ nke si n'etiti akara ndị China ewepụtalarị.
Meizu 16S na-ere ahịa na ụbọchị mbụ ya na ire ere
Chọpụta ihe banyere ahịa nke Meizu 16S na ụbọchị mbụ ya na China ebe erere ya n'ime elekere ole na ole na ire na mba ahụ.
Nubia's Red Magic 3, ekwentị na-esote egwuregwu sitere na ụlọ ọrụ China, gafere Geekbench na-egosi nsonaazụ dị egwu. Echefula ya!
OPPO Reno ka egosiputara na Europe ma ubochi ha weputara na onu ahia ha gha eweputa.
Chọpụta ihe banyere OPPO A1K, ekwentị ọhụrụ n'ime njedebe dị ala nke akara ndị China, nke enyere na Russia.
Choputa nkọwa mbu nke OUKITEL K12, ama ohuru ohuru a nwere batrị buru ibu nke biara na mmiri a.
Chọpụta ihe niile gbasara Realme C2, ama ama ọhụụ ọhụụ ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ke China ke ama ama ama.
Chọpụta nkọwa zuru oke nke Realme 3 Pro, ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ama ohuru na nke China.
OPPO akagbu ekwentị R
Chọpụta ihe banyere mkpochapụ ekwentị OPPO R, nke na-anọchite anya mgbanwe nke atụmatụ maka ndị na-emepụta China.
A ga-amalite ASUS ROG ekwentị 2 na nkeji nke atọ
Chọpụta ihe banyere mbata nke ASUS ROG ekwentị 2, nke kwesịrị ime n'oge ọkọchị a n'agbanyeghị na ọ ga-arụ ọrụ naanị na China.
Huawei kwenyere na na 2019 ọ ga-abụ onye nrụpụta ekwentị nke ekwentị n'ụwa
Dabere na CEO nke Huawei, na 2019, ọ ga - abụ, yana HONOR, onye na - emepụta ekwentị kachasị ukwuu n'ụwa.
OPPO na-ekpughe ọnụahịa nke Reno na weebụsaịtị ya
Chọpụta karịa maka ọnụahịa nke OPPO Reno ga-enwe, dị ka a hụrụ na weebụsaịtị nke akara ndị China na awa ndị na-adịbeghị anya.
Poptel V9: smartphone maka ụlọ nwere ọtụtụ ọrụ
Ọ bụrụ na ị na-achọ ekwentị maka ụlọ gị nke nwere ọtụtụ atụmatụ, Poptel V9 nwere ike ịbụ ama ị na-achọ.
Choputa ihe nile banyere Vivo S1, ohuru ohuru di iche-iche site na akara ndi China nke enyere n’ibe ya ma aga ebido ya n’oge n’adighi anya.
Meitu ga-akwụsị ịkwụsị ekwentị
Chọpụta karịa gbasara ọkwa ọkwa Meitu na-akwado na ha ga-akwụsị imepụta smartphones kpamkpam n'ihi ahịa na-adịghị mma.
OPPO debara aha ise nke Reno brand na Europe
Choputa ihe banyere ndebanye aha ekwentị OPPO ise nke o debanyere aha ya na Europe n’ime onodu Reno ya nke gha ada ahia n’April.
Chọpụta ihe niile gbasara Vivo X27 na Vivo X27 Pro, ụdị ọhụrụ dị n'etiti etiti ndị China nke ewegoro n'ihu ọha.
OPPO AX5s: Ntinye uzo ohuru ohuru
Chọpụta ihe gbasara OPPO AX5s, ekwentị ọhụrụ dị ala site na akara ndị China nke emegoro na mbụ na China.
OPPO F11: Obere nsụgharị nke F11 Pro
Choputa ihe ndi ozo banyere OPPO F11 nke ika ahu eweputara na ihe omume na India na adighi anya ghuta ulo ahia.
OPPO F11 Pro gosipụtara n’ihu ọha
Chọpụta ihe banyere ngosi nke OPPO F11 Pro na India, ekele nke anyị maara nkọwa zuru oke nke ekwentị.
Malite echi ị nwere ike idobe Oukitel C13 Pro
Anyị na-ekwu okwu ruo ọtụtụ izu maka mbido ọzọ nke Oukitel, smartphone maka akpa ego kachasị mma. Anyị na-ekwu okwu…
Vivo V15: Igwefoto na-adọrọ adọrọ na igwefoto azụ atọ maka etiti a
Chọpụta nkọwa nke Vivo V15, ọhụụ ọhụrụ nke akara ndị China nwere igwefoto n'ihu nwere ike iwepụ yana ese foto atọ azụ.
Choputa ihe banyere nkowa nke Vivo IQOO, ekwenti izizi nke ahia ohuru nke China egosiputara.
Ndakọrịta a na-atụ anya nke Pocophone na ọrụ HD nke ọrụ vidiyo na-agba ọsọ na-abịarute n'ụdị nwelite site na OTA
Jiri uru a wee zụta Ulefone Armor 5 naanị euro 155
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ imegharị ekwentị gị na ị na-achọ ihe nlereanya dị egwu, ọ ga-abụ na onyinye ahụ TomTop na-enye anyị ga-amasị gị.
Oukitel C15 Pro ga-ada ahịa na gam akporo 9 achịcha na 5G dakọtara
Asịrị ndị ọhụrụ metụtara ụlọ ọrụ Oukitel na-egosi na C15 Pro ga-eji gam akporo 9 Pie kụọ ahịa ahụ
Chọpụta karịa maka UMIDIGI S3 Pro nke ika a ị nwere ike ịzụta na Indiegogo yana ị nwere ike ịnweta n'efu na ntanetị na ntanetị.
Vivo V15 Pro: ama ohuru nwere igwefoto nwere ike iwepụ
Chọpụta ihe niile gbasara Vivo V15 Pro, nke ọhụrụ dị n'etiti akara ndị China nwere igwefoto nwere ike iwepụ ya ewepụtakwala ya.
Chọpụta ihe banyere nkọwa nke Vivo U1, ọkwa ọhụụ ọhụụ sitere na akara ngosi ndị China gosipụtara.
OUKITEL C13 Pro: Ama ohuru ohuru
Choputa ihe banyere OUKITEL C13 Pro, ama ohuru ohuru nke a ghaputara n’onwa March n’ime ulo ahia.
OUKITEL C15 Pro: Smartphone ọhụrụ ahụ nwere akara n'ọdịdị mmiri mmiri
Chọpụta ihe banyere OUKITEL C15 Pro, ama ọhụụ ọhụrụ nwere akara mmiri site na akara ndị China, ewegoro n'ihu ọha.
Vivo na-ekwupụta IQOO, akara ngosi ọhụụ
Choputa ihe banyere IQOO, ohuru ohuru nke Vivo kere ga-elekwasị anya na akụrụngwa nke ama egwuregwu na gam akporo.
Nubia ga-egosiputa ngwaọrụ mpịachi na MWC 2019
Chọpụta karịa maka ngosipụta nke Nubia na MWC 2019 ebe ha ga-eweta ọkwa mpịachi n'ihu ọha.
Choputa ihe banyere ama ohuru ohuru a, nke Vivo APEX 2019, ama ohuru ohuru na enweghi bọtịnụ ma obu oghere. Mara nkọwa ya ugbu a.
Na-eche echiche nke imeghari ekwentị gị? Jiri uru TomTop ndị a nyere
Guysmụ okorobịa nọ na TomTop tinye n'aka anyị ọtụtụ usoro iji megharịa ọdụ anyị nke anyị na-agaghị echefu.
Redmi mbụ na gam akporo Go nso na nso
Chọpụta ihe banyere Redmi Go, ekwentị mbụ nke ika a nwere gam akporo Go nke ga-ebido n'oge na-adịghị anya dịka ọtụtụ ntanye.
Vivo Y89: Ulo ohuru ohuru a di ugbu a
Chọpụta ihe banyere nkọwa, ọnụahịa na mwepụta nke Vivo Y89, ọhụụ ọhụrụ nke akara ngosi ndị China egosipụtala n'ihu.
I nwere ike were OUKITEL WP2 ugbua na ego kacha mma
Chọpụta ihe banyere OUKITEL WP2 a nke ị nwere ike were ugbu a na ọnụahịa kachasị mma na nkwalite a dị ruo Jenụwarị 20.
Jiri uru onyinye a wee zụta Oukitel U23 naanị euro 180
Oge tupu Christmas, yana ahịa ndị na-ewere ọnọdụ ozugbo ha gafere, bụ ihe kacha mma ...
Coolpad M3 bụ ọrụ gọọmentị: ekwentị ntinye na HD + panel (19: 9) na ndị ọzọ ọnụahịa dị oke ọnụ
Coolpad M3 bụzi ọrụ. Mụọ maka atụmatụ niile na nkọwapụta teknụzụ nke ekwentị ọhụrụ a.
Xiaomi Mi 8 Pro ga-amalite n'oge na-adịghị anya na mpụga China
A ga-emeputa Xiaomi Mi 8 Pro na mpụga China na gọọmentị. Chọpụta ihe banyere mwepụta nke ọhụụ ọhụrụ dị elu nke akara ndị China.
Xiaomi Mi 8 ga-amalite na ahịa ụwa. Chọpụta ihe banyere launching a ekwentị na ọhụrụ ahịa na mpụga nke China.
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ga-ebido na July 30 na China
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ga-oru na China na July 30 na eze. Mgbe izu nke nzuzo, anyị maara mgbe ọ ga-ada n'ahịa.
Xiaomi Mi Pad 4: Mbadamba ọhụrụ nke akara ndị China
Xiaomi Mi Pad 4: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta. Chọpụta ihe banyere mbadamba nkume ọhụrụ nke akara ndị China nke e gosipụtara taa.
OPPO Find X: flagship ọhụrụ nke ndị na-emepụta China
OPPO Find X: Nkọwapụta, ọnụahịa na mmalite. Chọpụta ihe banyere ekwentị dị elu nke akara ndị China nke emebugoro n'ihu n'ihu.
The Lenovo Z5 rere na ya ụbọchị mbụ na-ere na China. Chọpụta ihe banyere ihe ịga nke ọma nke akara ekwentị ndị China na mbido ya.
Xiaomi Mi 8 na-ere ihe na-erughị otu nkeji na China
Xiaomi Mi 8 na-ere na 37 sekọnd n'ụbọchị mbụ ya na China. Chọpụtakwuo ihe ịga nke ọma nke nnukwu njedebe nke akara ndị China na mbido ya na obodo gị.
Nokia X6 na-ere na 10 sekọnd na China
Nokia X6 rere na sekọnd 10 na China. Chọpụta karịa etu ekwentị Nokia ọhụrụ si aga ahịa na China.
Galaxy S9 na S9 + malitere na-acha uhie uhie na China
Galaxy S9 na S9 + dị na uhie na China. Chọpụta ihe banyere agba uhie ọhụrụ nke ọhụụ dị elu na-abanye n'ahịa na China.
A na-ehiwe Huawei Enwe 8 na China na ndị a bụ njirimara ya
Zute Huawei Enwe 8, ngwaọrụ nke na-abịa nwere njiri mara nke ọma ejiri mara ihe ọ na-ekwe nkwa, nke anyị hụrụ kọlụm 18: 9 dị nkenke, Qualcomm SD430 processor, yana ọfụma mara mma nke na-etinye ya na tebụl dị ka ọmarịcha , mara mma ma dị ike mobile. Anyị na-ewetara gị ya!
Xiaomi na-ekwupụta ọkwa Mi Box 4 na 4c dị naanị na China
Taa Xiaomi ekwuputala Smart TV Boxes abụọ, anyị na-agwa gị ihe niile gbasara Mi Box 4 na 4c
A ga-ewepụta ZTE Axon M na mba kachasị ukwuu na Asia. Ihe omume a ga - eme na Beijing, ma site na ebe a Androidsis, anyị nwere nkọwa maka gị.
Ọhụrụ Samsung W2018 pụtara n'ihu ọha, anyị na-agwa gị ihe niile gbasara igwe 'shei' nke ga-abata na ahịa ndị China n'oge na-adịghị anya
E gosipụtara Xiaomi Redmi 5A na China | Anyị na-agwa gị nkọwa
Xiaomi na-ewetara ekwentị ọhụrụ ya nke ga-achị n'ọhịa dị ala na ogo kacha mma / ọnụego kacha mma. Ọ bụ Xiaomi Redmi 5A. Anyị na-agwa gị!
Qualcomm bịanyere aka na nkwekọrịta 12.000 na ndị isi China na-emepụta ihe
N'oge na-adịghị anya ọbịbịa Donald Trump na China, ekwuputala nkwekọrịta Qualcomm na ndị isi China na-emepụta Xiaomi, Oppo na Vivo.
The Oppo F5 bụ a Chinese mobile na i nwere ike iji ebube enweghị na-efu efu ọ bụla na-elu ama na Samsung ma ọ bụ Apple logo.
OUKITEL MIX 2, ohuru si n’aka ndi na emeputa ihe na China
Kpoo OUKITEL MIX 2, nkwa nke onye mmeputa nke China a na elu nke nso a, smartphone nke nwere ike ime ka umuaka buru ibu.
The Huawei Mate 10 Lite nwere ike ịpụtaworị na China n'okpuru aha Huawei Maimang 6
Huawei Mate 10 Lite na-atụ anya ogologo oge nwere ike ịmaliteworị mbụ na China n'okpuru aha Huawei Maimang 6 tupu ịmalite onwe ya na ụwa ndị ọzọ.
Nkọwapụta nke Xiaomi Mi Mix 2 adịlarị n'ịntanetị ma tụọ aka na otu n'ime ekwentị kacha mma China na 2017
Nkọwapụta nke Xiaomi Mi Mix 2 adịworị na ntanetị ma tụọ aka na otu n'ime ekwentị kacha mma China na 2017.
Chọpụta smartwatches kacha mma China nwere oke mma / ọnụ ahịa ka ị na -emefu obere ego ị nwere ike zụta elekere zuru oke. Emelitere Septemba 2021
Companylọ ọrụ China bụ Comio na-amalite imeri ahịa ndị India site na mwepụta nke smartphones ọhụrụ atọ na ụdị offline na-enweghị atụ
Ebee ka ịzụta mobiles ndị China? Anyị na-ahọrọ ụlọ ahịa Spanish kachasị mma na nke mba ọzọ ebe ị nwere ike ịzụta ekwentị kacha mma China na ahịa
Chọpụta nke bụ mbadamba China kacha mma n'oge a. Ọ bụrụ na ị na -achọ ezigbo mbadamba, mara mma na ọnụ ala, echefula ndepụta emelitere na Septemba 2021
Aa ntị na nhọrọ nke igwe China kachasị mma maka ihe na-erughị euro 100 nke ị nwere ike ịzụta na uru kacha mma maka ego. Ndepụta emelitere!
Oppo R11 kwupụtara ọkwa na China
Onye na-emepụta ihe na China bụ Oppo na-ebuputa ọkọlọtọ ọhụrụ ya, bụ Oppo R11, ama ama dị ike, nke dị mma, igwefoto abụọ yana ọnụ ala
Samsung weputara Galaxy S8 Pirates nke ndi Caribbean na China
Samsung weputara mbipute puru iche nke Galaxy S8 nke ndi Pirates ohuru nke ihe nkiri Caribbean gosipụtara na igbe akụ
Ise mma-na-atụkwasị obi na China mobiles
Anyị na-ekpughere gị ọnụ ala smartphones ndị dị ọnụ ala na nke dị mma nke China, ụfọdụ nwere nkọwapụta adịchaghị mma na imepụta yana ndị ọzọ nwere obere ọkwa.
Gartner kacha ọhụrụ na-akwado data sitere na ọrụ IDC gara aga: Samsung na Apple Cede Market Kesara ndị nrụpụta China
Sọpụrụ 6A ọhụụ ọhụụ n'etiti ọnụahịa knockdown
Honor ka gosipụtara Honor 6A na China, ekwentị dị n'etiti agaghị agafe 150 euro na mgbanwe ahụ
Huawei gbagoro n’elu ndị na-eme ama ama na China
Huawei dọpụtara n'elu ntụpọ sitere na Oppo wee bụrụ onye na-ewu ewu ama ama kachasị ama na mbido mbụ nke 2017
Huawei P9 nwere ike imelite ya na Nougat n'izu na-abịa dịka ndepụta nke na-egosi mmelite niile sitere na akara ndị China.
Xiaomi Mi Electric skuta bụ ọhụrụ si China ụlọ ọrụ
Egwuregwu moto "smart" bụ ngwaahịa ọhụrụ nke ụlọ ọrụ China Xiaomi, nke ọ kpọrọ Mi skuta scooter naanị ihe karịrị $ 289.
Fọdụ gam akporo smartphones gaara eziga data nkeonwe na China
Ihe karịrị nde 700 dị ọnụ ala karịa gam akporo smartphones nwere ngwanrọ na-anakọta data onye ọrụ wee zigara ya na sava na China
Huawei Mate 9 Pro bụ onye ọrụ na China na 5,5 ″ QHD ihuenyo, 6GB RAM na gam akporo 7.0
Huawei Mate 9 Pro bụ ihe dị adị na China ka a na-egosi ya dị ka 5,5 "ama nwere mkpebi QuadHD na gam akporo 7.0.
Moto M bụ onye ọrụ ugbu a na China na batrị 3.050mAh na ahụ igwe
The Motorola Moto M bụworị onye ọrụ gọọmentị na China nwere usoro nkọwa na-adọrọ mmasị na ọnụahịa nke $ 295 iji gbanwee.
Xiaomi na-ere ihe niile Mi Note 2s naanị na sekọnd 50 na China
Naanị na 50 sekọnd Xiaomi enweela ike ire Mi 2 niile na ire ere ahụ ọ malitere ọ bụghị ọtụtụ awa gara aga.
Ekpughewo Vivo X7 na Vivo X7 Plus na China na mgbaji Snapdragon 652 na 16MP n'ihu igwefoto iji were selfies kachasị mma.
Xiaomi bu onye isi na China na onwa Eprel
N’April, Xiaomi nwetara 26 pasent nke ahịa nke otu n’ime ihe kachasị mkpa n’ụwa, ndị China.
Xiaomi na-ekwupụta Mi 4S, nzọ ọzọ dị ukwuu nke ndị nrụpụta China maka ihe na-erughị 260 XNUMX
Xiaomi na-eche ụbọchị dị egwu mgbe e gosipụtara Mi 5 na MWC na Barcelona. Ugbu a kpọsaa Mi 4D maka € 260
Nke a bụ Vivo X6SPlus
Ejirila Vivo ọhụrụ ọnụ ahịa kachasị elu. Nke a bụ Vivo X6SPlus.
A na-ere ụdị nkeji Xiaomi Mi Pad 2 na ihe na-erughị otu nkeji mgbe Xiaomi mere ka ọ dị maka ịzụta n'ịntanetị.
Ihe ndị a bụ echiche na echiche m na-eme ka m chee na ọdịnihu nke gam akporo dị na ọnụ ndị China
Xiaomi bụ ụlọ ọrụ na-ere ọtụtụ smartphones na China
Xiaomi nwetaghachi ọnọdụ mbụ dị ka onye nrụpụta nke na-ere ọtụtụ ekwentị na ahịa Eshia. Ogologo oge ole ka ebe mbụ ga-anọ?
Lenovo na-ebupụta Vibe X3 akara na China nwere oke ụda olu
Na China ha nwere ike ịzụta ụdị Vibe X3 atọ, dịka ọkọlọtọ, adịchaghị na Lite. Ha atọ kesara ihuenyo 5,5 nke anụ ọhịa Full HD.
Samsung Galaxy On5 na Galaxy On7 bụ ndị ọrụ gọọmentị na China
A malitelarị Galaxy On5 na Galaxy On7 na China, nke ga-abịa na ezigbo ọnụahịa na-enye ngwaike jikọtara nke ọma maka njedebe dị ala.
Huawei bụ onye na-ere ngwa ahịa na China
Dị ka data kachasị ọhụrụ bipụtara, Huawei bụ onye na-ere ekwentị kacha mma na China. N'ezie, anyị na-ekwu maka ahịa, ọ bụghị uru.
Huawei bụ nnukwu onye na-ere ama ama na China
China bụ mba dị mma ugbu a iji tụọ ọnọdụ nke ọtụtụ ndị nrụpụta kachasị mkpa dị ka Huawei, onye mmeri na nkeji ikpeazụ a.
Elephone Ele Watch, elekere ndị China na gam akporo Wear maka dollar 115
Elephone Ele Watch ga-abụ smartwatch mbụ dị ọnụ ala yana gam akporo Wear.
Ndị ọchịchị China na-enyocha Xiaomi maka omume mgbasa ozi ọjọọ
Xiaomi nke ndị gọọmentị China nyochara maka imebi iwu asọmpi mgbasa ozi.
Elephone Vowney, onye kachasị ike nke ndị nrụpụta China
Elephone bụ otu n'ime ndị nrụpụta China na-adọta ọtụtụ ndị. Ugbu a ọ na-eweta njedebe Elephone Vowney, ọnụ ya kachasị ike.
Elephone Ele Watch, nke a bụ smartwatch China na gam akporo Wear
Elephone nwere n'aka ya ihe nwere ike ịbụ nke mbụ China smartwatch na gam akporo Wear. Elelee Ele Ele Ele ele anya ka anyị ga - ahụ ihe ọ dị ka ya.
Xiaomi ka bu Eze ahia na China
Enweghị onye nwere ike iwepụ Xiaomi. Onye nrụpụta China ka bụ eze ahịa na China.
Xiaomi weputara Mi Note Pro na China site na iji ihuenyo QHD na 4GB RAM
Emeela Xiaomi Mi Note Pro na China wee rute na mkpebi QHD na ihe ngwọta maka nsogbu ọnọdụ okpomọkụ nke mgbawa Snapdragon 810.
Lenovo A3900, ọnụ ala dị ala site na ụlọ ọrụ China
Companylọ ọrụ China nwere aka ya ọnụ ọnụ ala, Lenovo A3900, ekwentị dị ọnụ ala yana nkọwa na ọnụahịa.
Mba 1 S6i, otu oyiri nke China nke Galaxy S6
Nke 1 S6i bụ mmepụta oyiri nke China nke Galaxy S6. Ejiri oyiri nke ọma na mpụga mana ọ dị iche na nkọwa.
UleFone Be Touch, ọnụ ọnụ ndị China yiri iPhone 6
UleFone bụ ụlọ ọrụ China nke a na-amachaghị n'èzí ahịa Asia, ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ka ọ gbasaa na ahịa ọhụrụ nwere ọdụ ọhụrụ.
Oppo R7, flagship ọhụrụ nke ndị na-emepụta China
The Oppo R7 ga-abụ ọhụụ ọhụrụ nke ndị na-emepụta China ma ọ ga-abụ ekwentị kachasị njọ n'ụwa, nwere naanị 4,85 mm.
Xperia Z3 ahụrụ na nchekwa data nke China
Xperia Z3 n'oge ahụ adịghị ka ọ dị ezigbo iche na Z2 onye bu ya ụzọ ruo oge anyị nwere ike ịma taa
Xiaomi Mi4 dịlarị maka ugbu a naanị na China
Xiaomi Mi4 bụ otu n'ime smartphones na-atọ ụtọ nke oge a, ọ ga-adọtakwa anyị nso n'oge na-adịghị anya
Ekwentị mkpanaka ndị China nwere ike ịnweta ụlọ ọrụ Spyware
Ekwentị mkpanaka ndị China nwere ụdị adịgboroja nke Playlọ Ahịa Google na ngwa ngwa nke Spyware nwere na G-data.
Ọ bara uru ịzụta ekwentị ndị China?
Otu n'ime ajụjụ ndị na-enye ọtụtụ ndị ahịa nsogbu bụ ma ọ bara uru ịzụta ekwentị ndị China. Azịza ya bụ ee ee
IPad mini na gam akporo? ezigbo nzụta azụta pụtara na China
Mmepụta okike zuru oke nke Obere iPad bụ mbadamba gam akporo nke na-ere na China maka $ 200.
Companylọ ọrụ China na-eweta mmepụta zuru oke nke iPhone5
Onye na-emepụta ihe na China ekwuola na mmepụta oyiri nke iPhone5, nke ga-arụ ọrụ dị ka sistemụ arụmọrụ gam akporo yana yana interface iOS.
Huawei Ascend D2, ndị China zitere maka njedebe dị elu
Huawei Ascend D2 bụ Smartphone nke China mere nke Huawei chọrọ iji banye n'ụzọ zuru oke n'ọkwa ahịa nke ama ama ama ama.
Samsung W899, a dịtụ peculiar gam akporo maka China
Samsung W899 bụ ọdụ mgbe ochie ejiri ihe mkpuchi klomshell were ya na ijiri ihu abụọ mebe ihe ngebichi n’elu ya.
Mbadamba ụrọ ọhụrụ na sistemụ arụmọrụ gam akporo gam akporo. Oge a ọ bụ TechPad, ngwaọrụ emere na China